Mohamed Salah Wuxuu Tusaale U Yahay Muslimiinta Kubadda Cagta - Weeraryahanka Liverpool Oo Door Ka Qaatay Soo Celinta Xiddigii Dhaqan Xumada Masar Looga Caydhiyay Ee Amr Warda. - Gool24.Net
Mohamed Salah Wuxuu Tusaale U Yahay Muslimiinta Kubadda Cagta – Weeraryahanka Liverpool Oo Door Ka Qaatay Soo Celinta Xiddigii Dhaqan Xumada Masar Looga Caydhiyay Ee Amr Warda.
June 29, 2019 Apdihakem Omer Adem
Tababaraha xulka qaranka Egypt iyo guud ahaan xidhiidhka kubadda cagta ee xulkaas ayaa go’aan ku gaadhay inay xulka dib ugu soo celiyaan xiddigii arrimaha dhaqan xumada la xidhiidha looga raacdeeyay wajibaadka qaranka ee Amr Warda.
Amr ayaa gabi ahaanba laga diray xulka kaddib markii gabadh dharka xaysiisa oo asal ahaan kasoo jeeda Masar balse haysata dhalasho England ahi ay banaanka keentay farriimo aan fiicnayn oo uu la wadaagay.
25 jirkan ka tirsan kooxda PAOK ayaa xulka qayb kasoo ahaa kulankii furitaanka ee tartanka koobka qaramada Africa ee ay guusha ka gaadheen Zimbabwe balse waxa uu seegay kulankii ay guusha kale ee 2-0 ka ah ka heleen DR Congo.
Soo celinta xiddigan ayay si wadajir ah uga qayb qaateen guud ahaan xiddigaha Masar balse waxa la aaminsan yahay inuu door gaar ahaaneed kulahaa hoggaamiyaha xulkaas iyo kooxda Liverpool ee Mohamed Salah.
“Waxaynu u baahanahay inaynu aamino fursadaha labaad, Waxaynu u baahanahay inaynu hoggaansano oo aynu wax barano, Diidmadu maaha jawaabta” Ayuu Mohamed kusoo daabacay bartiisa Twitter-ka.
Xidhiidhka kubadda cagta Egypt ayaa haatan war rasmi ah kasoo saaray xiddigaas iyaga oo sheegay inuu ganaaxa kasoo laaban doono Warda kaddib marka uu dhammaado wareega Group-yadu.
Madaxweynaha xidhiidhkaas ee Hani Abu Reda ayaa Khamiistii la kulmay xiddigaha xulka qaranka waxaana uu ka ogaaday rabitaankooda soo celinta Amr Warda sida xidhiidhku sheegay.
“Hani Abu Reda waxa uu amaanay dareenka caadifadeed ee midnimada ka dhaxaysa ciyaartoyda, Rabitaankooda in la cafiyo saaxiibkood Amr Warda oo laga qaado ganaaxa isaga” Ayay soo daabaceen xidhiidhka kubadda cagta Masar.
“Isagu (Habi Abu Reda) waxa uu go’aansaday inuu ku yareeyo ciqaabta ganaaxa ilaa dhammaadka wareega koowaad ee tartanka (Koobka qaramada Africa)”